Agricultural traktọ-1004 - China Xuzhou Fenghe Intelligent
Traktọ Series 1104/1104/1204/1304-A / 1404-A / 1504-A
∎ Ebe abịa China DEUTZ Engine (Electronic Control, Turbocharger na ofu-jụrụ) -Dongfeng Cummins na Shangcai engines nwere ike ịnara.
∎ Ebe Dana ma ọ bụ CARRARO n'ihu axle, ewu ígwè n'azụ axle.
∎ Ebe Three-na-otu gearbox na ezi uche na-agba nkesa.
■ tagzi na ikuku-ọnọdụ na-akwado okpomọkụ.
■ Unit ụba na ibu siri ike traction.
engine Power / ọsọ KW / r / min 73,5 (100) / 2300 82 (110) / 2200 91 (120) / 2200 97,5 (130) / 2200 105/2201 111/2200
Specific Fuel Oriri g / kw.h ≤230 ≤225 ≤220 ≤220
mbanye Type / 4 * 4 4 * 4 4 * 4 4 * 4 4 * 4 4 * 4
Dimension (L / W / H) mm 4840/2160/2990 5090/2160/3040 5090/2300/3070 5090/2300/3070 5090/2300/3070 5620/2300/3020
Track (ụkwụ ihu) mm 1552-1948 1552-1948 1698-2122 1698-2122 1698-2122 1698-2122
Track (azụ ụkwụ anọ) mm 1626-2150 1626-2150 1626-2150 1626-2150 1626-2150 1730-2300
Ground nwechapụ mm 480 450 460 460 460 480
Min.Running arọ kg 5100 5700 5700 5700 5700 6400
Gear Forward Speed km / h 3-33 3-32 4-33 4-33 4-33 3-33
Gear Reverse Speed km / h 6-28 6-27 6-28 6-28 6-28 6-28
taya Model Front na taya / 14.9-24 14.9-24 14.9-24 14.9-24 14.9-24 14.9-26
n'azụ na taya / 16.9-38 16.9-38 18.4-38 18.4-38 18.4-38 18.4-38
Usoro nke ike-mmepụta aro ụdị / N'azụ Position na onwe ha
Max. Sere-ala pistin sere KN 25 25 31 31 31 37
Previous: Agricultural traktọ-1104
Osote: Farm jikọtara mejuputa-1SZL-380
Agricultural Equipment traktọ
Agricultural Farm traktọ